Kitra – «ligue des champions d’Europe» : mpanjaka ny Real fa Amperora i Zidane | NewsMada
Kitra – «ligue des champions d’Europe» : mpanjaka ny Real fa Amperora i Zidane
Nametraka tantara vaovao eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, taranja baolina kitra, ny Real de Madrid. Ry zareo irery, no hany ekipa nahavita nandrombaka ny amboara, intelo misesy.
Voamarina izao fa mpanjakan’i Eoropa, eo amin’ny taranja baolina kitra, ho an’ny ekipa tompondaka ny Real de Madrid. Norombahin’izy ireo fanintelony indray mantsy ny “ligue des champions”, tamin’ity. Ny Real irery, ny hany ekipa nahavita nanatontosa izany satria intelo misesy tsy niala teo amin-dry zalahy izany, nanomboka ny taona 2016, 2017, 2018. Ankoatra izay, lasa Amperora-n’ny kaontinanta Eoropeanina, ihany koa i Zinedine Zidane, izay nahavita nanamontsana ny zava-bitan’ireo mpanazatra andrarezina. Izy irery koa hatreto, ny mpanazatra, nahazo ny “ligue des champions”, tao anatin’ny taona telo nifanesy.
Raha hiverenana kosa ny famaranana, tamin’ity “ligue des champions” ity dia resin’ny Real de Madrid, tamin’ny isa mazava, 3 no ho 1 ny Liverpool, ny asabotsy lasa teo, tao amin’ny kianja Kiev.
Azo lazaina, fa nitondra vintan-dratsy ho an’ny anglisy, ny fahavoazan’ilay egyptianina, Mohamed Salah. Voatery nandao ny kianja mantsy ny lehilahy, taorian’ny ratra nahazo azy, rehefa nifandona tamin’i Ramos, teo amin’ny minitra faha-27. Mety tsy ho afaka hiatrika ny “Mondial 2018”, afaka 17 andro ihany koa ny tovolahy.
Narian’i Karius, ny Liverpool
Na izany aza, mbola nanampy trotraka ihany koa ny tsy fahamatorana, nataon’i Karius, mpiandry tsatoby. Fahadisoana teo aminy mantsy ny baolina roa tafiditry ny Real. Ny voalohany, baolina nalefany saingy nifanitsy tamin’ny tongotr’i Benzema, ka tafiditra tany anaty tsatoby, teo amin’ny minitra faha-50. Nosahalain’i Mané, anefa izany teo amin’ny minitra faha-54.
Taorian’io baolina matin’i Mané io, nanova paikady i Zidane. Nampiditra an’i Bale izy, ka nahitam-pahombiazana izany. Vao niditra efatra minitra monja i Bale dia nampitombo ny isa ho 2 no ho 1, tamin’ny alalan’ny daka tsimbadika, teo amin’ny minitra faha-63, taorian’ny tolotra nataon’i Marcello. Tsy nijanona teo fa mbola nahafaty baolina indray izy, tamin’ny alalan’ny daka mandrivorivo, izay votsotra teny am-pelan-tanan’i Karius.
Vol de voiture: une Hyundai Galloper détournée à Ampasampito et retrouvée à Maevatanàna 26/11/2020
Taolagnaro : 46 ossements humains saisis 26/11/2020
Miarinarivo: un ancien maire accusé de viol sur une mineure 26/11/2020
Antanimora: un condamné à perpétuité se donne la mort 26/11/2020
Champ de tir de Langaina: destruction de plus de 70 engins explosifs 26/11/2020